Imigaqo yokusebenzisa | Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
Malunga neeSensi zoBugcisa
I-Art Sense yipapasho ye-intanethi ebonelela ngezimvo kunye nolwazi. Banomdla kwaye abanazibonelelo zemali okanye ezinye izibonelelo zosasazo. I-Art Sense ipapasha iintengiso ezivelisa ingeniso ukukhusela iindleko zendalo.
I-Art Sense ayivelisi nzuzo, kodwa ijolise ekukhuliseni ulwazi kunye nolwazi lwabasebenzisi kwizigaba eziphambili zendawo.
Ubunini beefoto kunye nokushicilelwa
Izixhobo zobugcisa ziyila, zifumana kubasebenzisi kwaye ziqokelele izinto zasimahla kwindawo ye-Intanethi yasimahla ngaphandle kokubonisa ilungelo lokushicilela imifanekiso. Imifanekiso yelungelo lokushicilela ipapashiwe kwaye idatha ikhuselwe kwaye iphathwa ngokuhambelana noMgaqo-nkqubo wabucala opapashiweyo. Imifanekiso nganye epapashiweyo ihamba ngokusebenza ngemifanekiso, umahluko, umgangatho, ukuhlela, njl. Akabango mbhali.
Izixhobo zobugcisa ziya kususa ngoko nangoko nawuphi na umfanekiso umyili wawo angavumelaniyo nawo kwaye zinike ubungqina ongenakuphikiswa bokuba ungubani.
Zonke izicatshulwa ezikwiSayithi yeeArhente yezobuGcisa zenziwa ngabahleli besayithi okanye zinikezwe ngumntu wesithathu ngendlela yamanqaku.
Ubunini bokushicilelwa kweqela lesithathu kunye nomxholo
I-Art Sense inelungelo lokushicilela, ngokubona kwayo, izinto zakwamanye amazwe ezifunyenweyo, kwaye azinoxanduva lwepropathi, kodwa ngumxholo kuphela. Imixholo ephikisayo, ekhubekisayo okanye yocalulo ayizukunyamezelwa nakweyiphi na iposti okanye inkcazo.
Iqela lezobuGcisa likholelwa ukuba naziphi na iinzame yokuziphatha enjalo okanye umbhalo ongashiywanga ngabacebisi uya kunikwa ingxelo ngokukhawuleza ngabasebenzisi.
Ukuphunyezwa kwezimvo ezicetywayo kwindawo
Izixhobo zobugcisa azinoxanduva lokuphumeza okungaphumeleliyo kwezimvo ezicetywayo kwindawo.
Iimpawu zezobugcisa zicebisa ukuba kuphela ngabo banamava okucokisekileyo ngokwaneleyo kubunzima beendlela ezifanelekileyo zokupheka abamele babandakanyeke ekuphekeni. Ukwahluka kunokwenzeka ngokuxhomekeke kwizinto ezininzi kwiimveliso kunye nokunambitheka. Iiyunithi ezibonisiweyo zibonakalisiwe kwaye zivumela umohluko wokulungiswa ukuya kufikelela kwi-20% yexabiso elichaziweyo eliguqulwe kubunzima obufanayo kunye / okanye iimitha zevolumu.
Izixhobo zobugcisa azikhuthazi nangayiphi na indlela, kodwa endaweni yoko - zicebisa ukuthintela abantu ngaphandle kolwazi olufanelekileyo, amava okanye isiqinisekiso, ukusebenza ngokusika, ukugrumba okanye ezinye izixhobo ezomatshini kunye / okanye zombane kunye nezixhobo ezinomngcipheko wokulimala.
I-Art Sense ilumkisa ukuba ukwakhiwa kwalo naluphi na uhlobo lwesakhiwo ngabantu ngaphandle kwemfundo eyimfuneko kubeka umngcipheko wokulimala okanye ukwenzakala.
I-Art Sense iyakongeza kwaye iguqule le miGaqo, kunye noMgaqo-nkqubo wayo wabucala nangaliphi na ixesha, ukuze uhlangabeze imeko eguqukayo kunye neemfuno zabasebenzisi bayo.
Khangela kugcino - Khetha inyanga - NgoDisemba 2019 NgoNovemba 2019 Ngo-Oktobha 2019 NgoSeptemba 2019 Nge-Agasti 2019 NgoJulayi 2019 NgoJuni 2019 Ngamana i-2019 Epreli 2019 NgoMatshi 2019 NgoFebruwari 2019 NgoJanuwari 2019 NgoDisemba 2018 Ngo-Oktobha 2018 NgoSeptemba 2018 Nge-Agasti 2018 NgoJulayi 2018 NgoJuni 2018 Ngamana i-2018 Epreli 2018 NgoMatshi 2018 NgoFebruwari 2018 NgoJanuwari 2018 NgoDisemba 2017 NgoNovemba 2017 Ngo-Oktobha 2017 NgoSeptemba 2017 Nge-Agasti 2017 NgoJulayi 2017 NgoJuni 2017 Ngamana i-2017 Epreli 2017 NgoMatshi 2017 NgoNovemba 2016 NgoJulayi 2016 NgoJuni 2016 Ngamana i-2016 Epreli 2016 NgoMatshi 2016 NgoJanuwari 2016 NgoDisemba 2015 NgoNovemba 2015 Ngo-Oktobha 2015 NgoSeptemba 2015 Nge-Agasti 2015 NgoJulayi 2015 NgoJuni 2015 Ngamana i-2015 Epreli 2015 NgoMatshi 2015 NgoFebruwari 2015 NgoJanuwari 2015 NgoDisemba 2014 NgoNovemba 2014 Ngo-Oktobha 2014 NgoSeptemba 2014 Nge-Agasti 2014 NgoJulayi 2014 NgoJuni 2014 Ngamana i-2014 Epreli 2014 NgoMatshi 2014 NgoFebruwari 2014 NgoJanuwari 2014 NgoDisemba 2013 NgoNovemba 2013 Ngo-Oktobha 2013 NgoSeptemba 2013 Nge-Agasti 2013 NgoJuni 2013 Ngamana i-2013 Epreli 2013 NgoMatshi 2013 NgoFebruwari 2013 NgoJanuwari 2013 NgoDisemba 2012 NgoNovemba 2012 Ngo-Oktobha 2012 NgoSeptemba 2012 Nge-Agasti 2012 NgoJulayi 2012 NgoJuni 2012 Ngamana i-2012 Epreli 2012 NgoMatshi 2012
© 2012-2019 Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi